Seychelles dia nampiseho tamin'ny hetsika "Voyages et évasion" tany Réunion
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Seychelles dia nampiseho tamin'ny hetsika "Voyages et évasion" tany Réunion
The Seychelles Tourism Board (STB) niara-niasa tamin'i Réunion, manam-pahaizana momba ny dia, i Anthurium Tourisme mba hampiroborobo an'i Seychelles ho toeran-kaleha mety ho an'ny mpandeha vondrona.
Ny tanjon'ny hetsika dia ny hampiroborobo ny toerana samihafa sy ny fananana trano fandraisam-bahiny natolotry ny masoivohon'ny fizahan-tany Anthurium Tourisme ho an'ireo mpanjifany ao Réunion.
Ilay hetsika nantsoina hoe 'Voyages et évasions' natao tao an-tanànan'i Saint Gilles, dia nanangona olona 70 nasaina avy amin'ny orinasa malaza toa an'i Citroen, Banque Française Commerciale hihaona amin'ireo matihanina amin'ny indostria ao anatin'izany ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ny biraon'ny fizahantany ary ny solontenan'ny hotely avy any Réunion sy Maurice.
Ny hetsika izay natao tamin'ny endrika atrikasa fihodinana robina B2B nataon'ny mpikarakara, dia nanolotra sehatra tsara ho an'ny tambajotra miaraka amin'ireo mpanjifa sy orinasa lehibe manatrika eo.
Ny fandraisan'anjaran'ny STB amin'ity hetsika ity dia mifanaraka amin'ny baikon'ny marketing azy ary i Bernadette Honore, STB Senior Marketing Executive an'ny Réunion sy ny Ranomasimbe Indianina dia nitana ny sainam-piavonana tamin'io hetsika io rehefa nanolotra an'i Seychelles tamim-pitiavana ireo vahiny isan-karazany nanatrika ny 'Voyages et évasions' izy '.
Mamporisika ireo nasaina tsy hamela fotsiny ilay hetsika, i Anthurium Tourisme dia natao manokana ho an'ireo fonosana tolotra manokana aseho isaky ny latabatra.
Nandritra ny STB dia nanaraka ny endriny tamin'ny alàlan'ny endrika marketing mifangaro izay manambatra ny fampiroboroboana ny toerana misy azy miaraka amin'ny fotoam-pizarana fizahan-toetra mba hitsapana ny fahalalan'ireo vahiny momba an'i Seychelles tamin'ny tanjona hitarika ny fahalianany amin'ilay toerana alehany.
Raha niresaka momba ny fandraisan'anjaran'ny STB tamin'io hetsika io dia nanambara ny solontenan'ny STB ao La Réunion fa ny hetsika dia nanome fahitana tena tsara ho an'ny toerana haleha.
“Ny fisian'i Seychelles tamin'ny hetsika toy ny 'Voyages et évasions' dia nandray anjara tamin'ny fanomezana fahitana bebe kokoa an'ireo orinasa malaza malaza La Réunion. Nahita fahalianana lehibe izahay satria ny mpandray anjara sasany dia efa nanomana fialantsasatra ho an'ny vondrona any Seychelles amin'ity taona ity.
Manantena ny mpanao fialantsasatra bebe kokoa isika amin'ny tsena satria ireo mpandray anjara hafa izay mbola tsy nanapa-kevitra ny amin'ny fialantsasatra manaraka dia liana hahafantatra bebe kokoa momba an'i Seychelles. Nisy ihany koa ny fitomboan'ny fahalianana avy amin'ireo orinasa manana klioba manitsaka, izay tsy hahatratra ity andiany voalohany amin'ny hetsika Seychelles Nature Trail ity, momba ny fanontana 2021, '' hoy i Bernadette Honore.
Ny hetsika dia nanatsara ny fahitana ny toerana haleha any Réunion indrindra ho an'ireo mpitsidika mety ho an'ny mpanao dia lavitra ho an'ny fizarana fialamboly.
'Voyages et évasion' nikatona tamina takelaka fanaovana cocktail ho an'ireo nasaina tao amin'ny Anthurium Voyages.
Vaovao misimisy momba an'i Seychelles.
Fitiavan-karena amin'ny Coronavirus: Tsipika Cruise Norveziana
Sina sy ny minisitry ny raharaham-bahiny ASEAN hanao fivoriana vonjy maika momba ny coronavirus ao Laos